15 Kulliyadaha yaryar ee ugu Fiican Bartamaha -2022
Baro Ummadaha Dibedda
October 17, 2021 Eze Thaddaeus
15 Kulliyadaha yaryar ee ugu Fiican Dhexe Dhexe
Ma rabtaa inaad wax ka barato Midwest? Maqaalkan, waxaan ku diyaarinay liis dheer oo ah kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Badhtamaha -galbeed si ay kaaga badbaadiyaan culeyska iyo saacadaha dheer ee raadinta iskuul aad ka dalbato. Taa bedelkeeda, waxaad si taxaddar leh u dhex mari kartaa maqaalkan oo aad ka soo qaadan kartaa dhowr dugsi oo xiisaynaya danahaaga.
Midwwest-ka Mareykanka ama Midwest waa eray loo isticmaalo in lagu tilmaamo gobolada waqooyi-dhexe ee Mareykanka Mareykanka. Waxaa jira 12 gobol oo ku yaal Bartamaha -galbeed kuwaas oo ah Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Nebraska, North Dakota, South Dakota, iyo Wisconsin.
Laba-iyo-tobankan gobol waxay si wadajir ah uga kooban yihiin Midwest waxaadna fursad u heli kartaa inaad wax ka barato mid ka mid ah kulliyadaha ku yaal mid ka mid ah gobolladan. Machadyada ku yaal Midwest waxay ku jiraan barnaamijyo iyo koorsooyin ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka oo wax ku barta waxay kuu ogolaan doontaa inaad ka qayb qaadato waxbarasho heer caalami ah oo tayadeeda waxbarasho laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan.
Maqaalkan, waxaan kaga hadalnay kulliyadaha yaryar ee ugu wanaagsan Midwest, waxay noqon kartaa mid ka mid ah 12-ka gobol, kulliyadahani waa kuwo yar oo dhul ah ama dad ama labadaba. Tani waxay keenaysaa faa iido maxaa yeelay cabbirka yar wuxuu ka dhigan yahay in kambuyuutarku aad u yar yahay, fasallada sidoo kale dadku aad buu u yar yahay waxaana jira is -dhexgal weyn oo u dhexeeya ardayda iyo macallimiinta.
Mid ka mid ah caqabadaha haysta hay'adaha sare ayaa ah inay aad u badan yihiin, halka kulliyadahaan yar -yar ee Midwwest ay yeelan doonaan qiyaastii 2,000 ilaa 5,000 oo arday, hay'adaha waaweyn, kuwa caanka ah waxay yeelan doonaan qiyaastii 25,000 illaa 60,000 oo arday. Waxaa jira is dhex galka ardayda iyo macalinka oo yar iyo helitaanka borofisarkaaga naftaada, xitaa wakhti yar, way adagtahay.
Si ka duwan kulliyadahaan yar -yar ee Midwwest, ardayda ka yar waxay ka dhigan yihiin dalab ka yar in lala kulmo macallin haddii aad doonaysid inaad la kulanto, waad samayn kartaa wakhti kasta oo aad rabto oo waqti la qaad. Inta lagu jiro isdhexgalkaan mid-ka-ah ee u dhexeeya ardayga iyo macallinka, ardaygu wuxuu ka helayaa macallimiintooda macluumaad aad u qiimo badan oo ay si isku mid ah ugu adeegsan karaan xalka halka ay ku sugan yihiin arrimaha.
Sidoo kale, kulliyadahaan yaryar ee ugu fiican ee ku yaal Galbeedka -dhexe ma aha kuwo tartamaya sidoo kale shuruudaha gelitaankoodu ma adka. Marka, haddii aadan haysan darajooyin dhalaalaya oo aad rabto inaad ku sii wadato barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda, kulliyadahaan yar -yar ee Midwwest waa xulashadaada ugu fiican. Oo kaliya waxaad ka sii wadi kartaa barnaamijka shahaadada koowaad ee kulliyadahaan sababtoo ah waa diiradda ugu weyn.
Waxaad ku kasban kartaa shahaadada bachelorka barnaamijyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin sayniska kombiyuutarka, injineernimada korontada, farshaxanka xorta ah, ganacsiga, cilmi -nafsiga, bayoolajiga, beeraha waxbarashada, iyo qaar kaloo badan. Shahaadooyinka la guddoonsiiyay ayaa sidoo kale lagu aqoonsaday shaqaalaha xoogga HR adduunka oo dhan.
Ka dooro machadka mid ka mid ah kulliyadaha hoose oo raac xiriirka ku habboon si aad wax badan uga ogaato shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
1 Kulliyadaha yaryar ee ugu Fiican Dhexe Dhexe
1.1 1. Carleton College
1.2 2. Kuliyada Kenyon
1.3 3. Kulliyadda Grinnell
1.4 4. Kulliyadda Macalester
1.5 5. Jaamacadda DePauw
1.6 6. Jaamacadda Denison
1.7 7. Kuleejka Ozarks
1.8 8. Kulliyadda Oberlin
1.9 9. Kulleejada Wheaton
1.10 10. Kuliyadda St. Olaf
1.11 11. Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT)
1.12 12. Machadka Teknolojiyadda ee Illinois
1.13 13. Kuliyadda Monmouth
1.14 14. Jaamacadda Wesleyan ee Nebraska
1.15 15. Kulliyadda Concordia
Kulliyadaha yaryar ee ugu Fiican Dhexe Dhexe
Ka dooro kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Dhexe -dhexe ee hoos ku taxan. Sidoo kale, waxaad had iyo jeer codsan kartaa in ka badan mid ka mid ah dugsiyadan si aad u hesho fursado badan oo lagu galo.
1. Kulliyadda Carleton
Kulliyadda Carleton waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Dhexe -Dhexe. Waxaa la aasaasay 1866 sidii kulliyad fanka xorta ah oo gaar loo leeyahay oo ku taal Northfield, Minnesota. Wadarta cabbirka kambuyuutarku waa 1,040 hektar, waa mid yar oo ah bulsho isku xidhan oo aad ku kasban doontid fikirka muhiimka ah iyo xirfadaha xallinta dhibaatooyinka, kobcinta hal-abuurkaaga, iyo aaladaha isgaarsiinta ee wax ku oolka ah si aad dunida si fiican u fahamto.
Kulliyaddu waxay bixisaa in ka badan 50 majors oo ay ardaydu ka dooran karaan. Haddii mid ka mid ah kuwa waaweyn uusan ku danaynayn, waxaad abuuri kartaa kuwo cusub oo aad heli kartaa waxbarasho tayo leh oo la jaanqaadaysa danahaaga. Ugu dambayn, kulliyadaha ayaa ardayda siiya kaalmo maaliyadeed si ay waxbarashadooda uga dhigaan mid jaban intii suurtogal ah.
Booqo Websaydhka Dugsiga
2. Kuliyada Kenyon
Sida Carleton oo kale, Kulliyadda Kenyon sidoo kale waa kulliyad fanka xorriyadda gaarka loo leeyahay laakiin waxay ku taal Gambier, Ohio oo ka mid ah 12 -ka gobol ee Midwest. Kenyon waa mid ka mid ah koleejyada yaryar ee ugu wanaagsan Midwest ee la aasaasay 1824 waxayna bixisaa kaliya barnaamijyada shahaadada koowaad. Tartanka dugsigani ma sarreeyo wuxuuna qiraa qiyaastii 80% codsadayaasha sannad walba.
Xogtii hore, waxa jira 1,740 arday oo ka diiwaan gashan 1,000-acre kambaskeeda kaas oo lagu dejiyay bulshada miyiga ah. Manyon -ka Kenyon waa mid ballaaran oo qoto dheer, oo bixiya in ka badan 50 heer, kuwa aan qaan -gaarin, iyo xoog -saaris waxaadna samayn kartaa laba -laab weyn ama naqshadayn mid kugu habboon. Gargaar dhaqaale iyo deeqo waxbarasho ayaa sidoo kale la heli karaa.
3. Kulliyadda Grinnell
Kulliyadda Grinnell waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu wanaagsan Midwest ee la aasaasay 1846 koox ka mid ah Jameeco New England. Qiimayntii ugu dambeysay, Grinnell wuxuu ku jiraa 13th loogu talagalay kulliyadda fanka xorta ah ee ugu fiican Mareykanka. Grinnell waa meel aad ka baari karto danaha tacliimeed ee ballaaran, oo ay ku jiraan koorsooyinka sayniska iyo caafimaadka, oo aad ka hesho taageerada aad u baahan tahay si aad u sii wadato barnaamij qalbigaaga ka dib.
Waxaa jira in ka badan 500 koorsooyin oo aad adigu ka dooran karto ama aad naqshadayn karto. Grinnell waa inuu noqdaa kulliyadda ugu yar ee leh barnaamijyo badan.
4. Macalester College
Macalester waa kulliyad faneedka xorta ah ee gaarka ah oo bixisa afar sano oo keliya barnaamijyo jaamacadeed. Waxaa lagu aasaasay 1874 Saint Paul Minnesota waxayna aqbashaa ardayda caalamiga ah. Waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Galbeedka Dhexe oo ku nasanaysa 53 hektar oo dhul ah waxayna qirtay 2,174 arday dayrtii 2018.
Halkan College Macalester, waxaa jira in ka badan 800 oo koorsooyin hodan ah oo kala duwan oo aad ka dooran karto. Koorsooyinkan waxaa bixiya macalimiin caalami ahaan iyo qaran ahaanba la aqoonsan yahay kuwaas oo waxqabad muuqda ka sameeyay dhinacyadooda. Waxaa jira 38 heer, 40 carruur ah, iyo 10 uruurin oo dhammaantood loogu talagalay inay si guul leh kuu dejiyaan wejiga xiga ee noloshaada.
5. Jaamacadda DePauw
Jaamacadda DePauw waa bulsho firfircoon, kala duwan, iyo bulsho dhaqamo kala duwan leh ee bartayaasha ka yimid Maraykanka iyo in ka badan 32 waddan. Jaamacadu waa machad faneedka xorta ah ee gaarka ah ee tacliinta sare oo ku taal Greencastle, Indiana. DePauw, waxaad heli doontaa inaad ka qayb qaadato "tacliintooda heerka dahabka ah" si ay kuugu diyaariyaan guusha shakhsi ahaaneed iyo kuwa xirfadeed.
Waxaad ka dooran kartaa kala -duwanaanta baaxadda leh, kuwa aan qaan -gaarin, iyo dariiqyada laga bixiyo DePauw ama adiga ayaa abuuri kara adiga. Dhammaan barnaamijyada tacliinta waa afar sano waxayna u horseedaan shahaadada bachelorka marka laga reebo barnaamijka Wadada Caafimaadka iyo Caafimaadka. Koorsooyinka sayniska ee halkan waa yar yihiin laakiin koorsooyinka farshaxanka iyo cilmiga bulshada ayaa badan, in ka badan 100.
6. Jaamacadda Denison
Jaamacadda Denison waxaa lagu aasaasay 1831 Granville, Ohio oo ah kulliyad farshaxan oo gaar loo leeyahay. Waxaa si joogto ah loogu qiimeeyay koleejyada yaryar ee ugu fiican Bartamaha Dhexe waxayna bixisaa barnaamijyo afar sano ah oo keliya. Kulliyad yar ahaan, tirada ardaydu ma badna, waxaa jira ilaa 2,200 arday oo bixiya 60 barnaamij waxbarasho.
Ardayda dhigata Jaamacadda Denison waxay ka kala yimaadeen dhammaan 50 -ka gobol iyo 37 dal, tani waxay ka dhigaysaa machadka iyo jawi dhaqammo kala duwan. Farshaxanno fara badan oo kala duwan iyo sayniska bulshada ayaa halkan lagu bixiyaa laakiin kuwa waaweyn ee caanka ah waxaa ka mid ah isgaarsiinta, dhaqaalaha, Ingiriisiga, bayoolajiga, iyo taariikhda.
7. Kuliyada Ozarks
Haddii aad dhammaan ku saabsan tahay inaad waxbarasho ka hesho dugsi Masiixi ah markaa College of the Ozarks waa meesha adiga. Kuleejka waxaa lagu aasaasay 1906 meel miyi ah oo ku taal Point Lookout, Missouri. In ka badan 1,400 oo arday ayaa ka diiwaangashan 30 -ka maado ee tacliinta sare ee Bachelor of Arts iyo Bachelor of Science barnaamijyada. Waxa kale oo ay lambarka 1 ka gashay qaybta Warbixinta Maraykanka iyo Warbixinta Adduunka ee Kulliyadaha Gobolka ee ugu Fiican ee Midwest.
Ogolaanshaha iyo kaalmada maaliyadeed ee C of O waxay u shaqeeyaan si ka duwan. Waxaa loo baahan yahay in ardayda soo galeysa ay muujiyaan baahida dhaqaale ee la aqbali karo iyo marka lagu aqbalo, wax lacag ah lagaa qaadi maayo haddii aad u socoto barnaamij waqti-buuxa ah. Koleejku waxa uu leeyahay barnaamij shaqo oo arday ah iyo deeqo halkaas oo ardayda looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan 15 saacadood toddobaadkiiba gudaha jaamacadda iyo laba toddobaad oo shaqo oo 40 saacadood ah inta lagu jiro nasashada.
Barnaamijkan dartiis, ardayda wax lacag ah lagama qaado.
8. Kulliyadda Oberlin
Kulliyadda Oberlin waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Midwest, oo ku yaal Oberlin Ohio. Kulliyadda Farshaxanka iyo Sayniska ee Oberlin waxay bixisaa barnaamij waxbarasho ballaadhan oo adag oo ka badan 40 majors tacliimeed iyo in ka badan 12 qaan -gaar ah oo isku -dhafan iyo isku -dhafan isku -dhafan. Ardayda raba inay noqdaan fannaaniin xirfad leh waxay wax ku baran karaan muusiga Conservatory of Music.
9. Kuliyadda Wheaton
Kulliyadda Wheaton waa machad diimeed kale oo ku jira liistada kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Dhexe -Dhexe. Waxaa la aasaasay sanadkii 1860 -kii baabiiyeyaashii wacdinta ee Wheaton, Illinois. Kuleejku sidoo kale waa kan ugu horreeya liiskayaga ee bixiya barnaamijyada shahaadada koowaad iyo dib -u -dhigashada labadaba.
Shahaadooyinka shahaadada koowaad waxay ka badan yihiin 40 oo ku baahsan fanka iyo sayniska. Waxaa jira 18 arday oo ka qalin jabiyay shahaadooyin dhinacyo kala duwan oo waxbarasho ah. Codsiyada waa onleenka ama app -ka arday kastana wuxuu helayaa fursad uu ku helo kaalmo maaliyadeed marka la oggolaado.
10. Kuliyadda St. Olaf
Kulliyadda St. Olaf waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu fiican Dhexe -dhexe oo la asaasay 1874 -kii oo ah kulliyad fanka xorta ah oo gaar loo leeyahay oo ku taal Northfield, Minnesota. Kulliyaddu waxay leedahay xiriir diimeed iyo, illaa hadda, kan saddexaad ee liiska ku jira. Kuwa raadinaya kulliyad xiriir la leh diinta hadda waxay haystaan ​​fursado badan oo ah halka ay ka dalban karaan.
Ujeeddada kulliyadda ayaa ah in ardayda lagu xujeeyo inay heer sare ka gaaraan farshaxanka xorta ah, la baaro caqiidada iyo qiyamka, iyo in la sahamiyo xirfado macno leh oo loo dhan yahay, bulshada ku hawlan adduunka oo nafaqaysay dhaqanka Lutheran. Kaliya barnaamijyada shahaadada koowaad ayaa la bixiyaa. Waxaa jira baaxad balaaran oo kala duwan iyo urursanaanta ardayda si ay u kala doortaan. Barnaamijyada oo dhan waxay u horseedaan Bachelor of Arts iyo Bachelor of Music.
11. Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT)
Kani waa dugsigii ugu horreeyay ee sayniska iyo tiknoolajiyadda ee liisaska kulliyadaha yaryar ee ugu fiican ee Dhexe -Dhexe. Kuwa doonaya in ay ku sii wataan shahaadada injineernimada, xisaabta, ama sayniska ee kulliyad yar waxay sidaas ku samayn karaan Machadka Farsamada ee Rose-Hulman. Manhajka halkan ayaa si qoto dheer diiradda u saaray injineernimada iyo cilmiga dabiiciga ah ee heerarka hoose ee waxbarashada laakiin waxaa jira barnaamij yar oo qalin jabin ah in kastoo.
Muddo 23 sano ah, RHIT waxay si isdabajoog ah ugu qiimaynaysay koolejka injineernimada lambarka 1 ee loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee Mareykanka News & World Report. Barnaamijyada tacliinta waxay daboolaan koorsooyin injineernimo iyo saynis oo aad u ballaaran oo ay ku jiraan injineernimada biomedical, injineernimada kombiyuutarka, injineernimada madaniga, iyo injineernimada korontada.
12. Machadka Teknolojiyadda ee Illinois
Iskuul kale oo farsamo oo loogu talagalay ardayda sayniska waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal Chicago, Illinois oo la aasaasay1890. Illinois Tech, sida badanaa loo tixraaco, waa mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu wanaagsan Midwest. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan dugsiga kore, midkani wuxuu bixiyaa shahaadada koowaad ee jaamacadda, shahaadada koowaad ee jaamacadda, iyo shahaadada dhakhtarnimada maahan kaliya sayniska iyo injineernimada laakiin sidoo kale farshaxanka.
Waxaa jira barnaamijyo ku saabsan ganacsiga, isgaarsiinta, naqshadeynta, injineernimada, cilmi nafsiga, dhismaha, iyo waxyaabo kaloo badan. Illinois Tech waxay leedahay shan kulliyadood, machad, iyo dugsi ganacsi oo ay barnaamijyadan iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo fara badan lagu bixiyo.
13. Kuliyadda Monmouth
Kulliyadda Monmouth waxay ku taal Illinois waxaana lagu aqoonsan yahay kulliyadaha yaryar ee ugu fiican. Waa kulliyad fanka xorta ah ee Presbyterian-ka waxayna iska diiwaangelisaa ku dhawaad ​​900 oo arday oo ka kala yimid 21 dal iyo manhaj aasaasi ah oo ay ku jiraan 40 majors, 43 aan qaangaarin, iyo 17 barnaamijyo xirfadeed ka hor ah.
Monmouth waxay diiradda saartaa waxbaridda shahaadada koowaad ee jaamacadda oo leh barnaamijyo ku baahsan dhowr maaddo oo isku dhafan, saynis, farshaxan, bini'aadminimo, luqado shisheeye, iyo in ka badan. Kuleejku wuxuu kaloo bixiyaa barnaamijyo caafimaad hore iyo injineernimo hore ah.
14. Jaamacadda Wesleyan ee Nebraska
Jaamacadda Nebraska Wesleyan waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad iyo dibaddaba ah, laakiin waxay aad ugu badan tahay barnaamijyada shahaadada koowaad waxayna leedahay arday aad u yar oo ku jira heerka jaamacadeed. Machadku waxa uu wax ku bartaa dhaqanka waxbarashada kuliyada fanka liberaaliga ah waxana uu leeyahay in ka badan 100 jaamacadood oo jaamacadeed, kuwa aan qaan-gaarin, iyo barnaamijyo hore oo xirfadeed. Waxaa jira saddex barnaamij oo qalin -jabiya.
Jaamacaddu waxay u heellan tahay kobcinta garaadka iyo shaqsiyeedka marka la eego waxbarashada farshaxanka xorta ah iyo jawi walaac Masiixi ah. Sidoo kale waa machad ay ka go'an tahay inay heer sare ka gaarto dhammaan dhinacyada dadaalka tacliinta.
15. Kulliyadda Concordia
Kulliyadda Concordia waxay ku taal Moorhead, Minnesota waana mid ka mid ah kulliyadaha yaryar ee ugu wanaagsan Midwest. Waxa jira in ka badan 120 goobood oo waxbarasho ah iyo 13 barnaamij oo horudhac ah oo la kala dooranayo. Kulliyaddu waxay ballan -qaadaysaa inaad heli doonto layliyo, cilmi -baaris, iyo waayo -aragnimo waxbarasho oo caalami ah iyada oo aan loo eegin barnaamijka aad dooratay inaad waxbarto.
Kulliyaddu waxay u qaybsantaa saddex dugsi; Dugsiyada Xirfadaha Caafimaadka, Farshaxanka iyo Sayniska, iyo Ganacsiga dhamaantood waxay bixiyaan barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu horumariyo fikirkaaga muhiimka ah iyo xirfadaha hal abuurka. Kuleejku waxa kale oo uu leeyahay qayb ka qalinjabinta iyo sii wadida waxbarashada halkaas oo aad ka dooran karto qalin jabinta, jaamacada ka dib, barnaamijyo la dardar galiyay ama koorsooyinka horumarinta xirfada.
Tani waxay keenaysaa in la soo afjaro kulliyadaha yaryar ee ugu wanaagsan Midwest, dhammaan 15 ka mid ah machadyadan ayaa ah kuwa ugu sarreeya si uun ama si kale, oo aad gasho mid ka mid ah waxay ku siin doontaa waxbarashada loo baahan yahay si aad u horumariso kartidaada. Hadday tahay cilmiga sayniska, farshaxanka, bini'aadantinimada, ama tignoolajiyada kuliyadaha halkan ayaa ku daboolay.
Dhammaantood waxay bixiyaan kaalmo dhaqaale iyo fursado deeq waxbarasho ardaydooda. Marka aad codsatid oo la aqbalo, waxaad si toos ah ugu-qalan tahay kaalmada dhaqaale.
Kulliyadaha yaryar ee ku yaala Midwest miyay ku fiican yihiin tacliinta?
Kulliyadaha yaryar ee runtii ku wanaagsan cilmiga tacliinta ayaa soo saaray tiro arday ah oo magacyo waaweyn ku yeeshay hal warshad ama mid kale. Waxaad noqon kartaa magaca weyn ee xiga.
13 Kuliyadaha Bulshada ugu Fiican California
13 Dugsiyada Sare ee Boodhinka ah ee England ee Ardayda Caalamiga ah
13 Kulliyadood oo Ka-dhaafaya Shuruudaha Xisaabta
13 Kulliyadaha injineernimada ugufiican Mareykanka oo leh deeqo waxbarasho
Kulliyadaha Dumarka ee raqiiska ah iyo Jaamacadaha Maraykanka iyo Kanada
10 Kulliyadaha ugu raqiisan Toronto Canada ardayda Caalamiga ah
Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:15 Siyaabood Oo Luqadda Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha Si Faa'iido Leh
Post Next:Koorsooyinka Gaaban ee Gaarka ah ee 7 ee ugu baahida badan Koonfur Afrika
cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa.
Maxay yihiin adeegyada ka wanaagsan kuwan?
Z Qormada - adeegga qoraalka qoraalka.
Waxaan la shaqeynaa oo keliya dadka u dhashay qorayaasha curiska si loo hubiyo inaad hesho qormooyinka ugu fiican. Helitaanka warqaddaadii waa la qabtay waa fududahay. Soo ogow sida.